प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग ? साना दल आक्रामक, ठूला दल कुरा चपाउँदै - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७८, मंगलबार ७ : १९
अग्नि सापकोटा, सभामुख
न्यायालयको विवादमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गहन र विस्तृत अध्ययन गर्नेछु । निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र रूपमा पहल गर्नेछु । तीनवटै अंगको ओज/गरिमा कायम हुनुपर्छ । ओजस्वी हुन्छ । अहिले भइरहेको बहस नजिकबाट हेरेको छु । बहसबाट निकै राम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ । सहज र स्वभाविक निष्कर्ष निकाल्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर, असाधारण परिस्थिति छ । छिटोभन्दा छिटो निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
किन समस्या गहिरिँदै गएको छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेको छु । यहाँहरुले बहस र क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुभएको छ । रामशाहपथ र बारमा जे(जे छलफल घटना भइरहेका छन् त्यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो सत्य पहिल्याउने कुरा हो । मैले खेल्नुपर्ने भूमिकामा म लाग्नेछु । मैले लिने पहलकदमीमा केहीले छेक्ने छैन ।
बार एसोसिएसनले चलाएको अभियानबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त भयो । दंगा प्रहरी हस्तक्षेपका कुरा सुनेर दुस्ख लागेको छ । दुस्ख व्यक्त गर्दछु । यसलाई ठिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।
अदालतमा भइरहेका घटनाप्रति दुस्ख लागेको छ । गुण्डाहरु बारमा आएर अधिवक्तालाई तथानाम भन्ने घटना दुभाग्यपूर्ण छ । कोर्टभित्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सामान्य नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउँछ भने बारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नपाउने रु कस्तो संस्कार हो यो ?
रामप्रकाश पुरी, प्रवक्ता, जनमोर्चा